Wax ka ogaaw 7-arimood oo ay isku mid ka yihiin boqorka jaceylka (SRK) iyo boqorka murugada (Dilip Kumar) – Filimside.net
Wax ka ogaaw 7-arimood oo ay isku mid ka yihiin boqorka jaceylka (SRK) iyo boqorka murugada (Dilip Kumar)
Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan oo loo yaqaan boqorka jaceylka ayaa maalmo ka hor booqda aqalka Super Star Dilip Kumar oo loo yaqaan boqorka murugada.
Hadaba Saira Banu oo u dhaxdo Dilip Kumar ayaa sheegtay in SRK wiilkooda oo kale uu yahay madaama lamaanahan aysan waligood ubad isku dhalin ama Alle awlaad ugu deeqin.
Hadaba Bollywood Hungama ayaan kasoo xiganay 7-arimood oo ay ku sheegtay inay isku mid ka yihiin boqorka jaceylka iyo boqorka murugada:
1. Labaduba Dilip Kumar iyo Shah Rukh Khan waa Muslimiin kuwaas oo aan kasoo jeedin qoysas fanka magac ku lahaa ama xariir la lahaa Bollywood-ka, waxayna halgan u galeen sidii ay ku noqon lahaayeen Superstars awood badan.
2. Labaduba waxay guursadeen haweeney da’ahaan iyaga ka yar: Dilip wuxuu guursaday Saira oo isaga ka yar 19-sano, halka SRK ay u dhaxdo Gauri Khan oo 5-sano ka yar.
3. Labaduba waxay caan ku yihiin doorka taariikhiga ah Saratchandra Chatterjee ee filimka Devdas inay wada jileen 50-sano ka hor Dilip ayaa filimka Devdas sameeyay halka 50-sano kadib SRK filimka Devdas sameeyay inkastoo labada filim sheeko ahaan kala duwanaayeen.
4. Waxaa xiiso leh in labadooduba ay leeyihiin aqalo waa weyn oo qasri lagu tilmaamay, Dilip qasrigiisa xaafada Pali Hill ayuu ku yaalaa halka SRK qasrigiisa weyn uu ku yaalo xaafada Mannat.
5. Dilip iyo SRK waxay ka siman yihiin ayagoo ah labo Superstar hadana inay dabacsan yihiin sidoo kalena aysan dadka iska weyneyn sidoo kalena fanka Hindiya shacbiyad balaaran ayay ku leeyihiin.
6. Dilip Kumar nafsad ahaantiisa ama door isaga ka hadlaayo wuxuu ku matalay filimka Koshish, sidoo kale SRK nafsad ahaantiisa ama door isaga ah ku matalay filimka Fan.
7. Labaduba waxay shacbiyad balaaran ku leeyihiin dalka Pakistan oo ay asal ahaan kasoo jeedaan, Dilip hada ka hor waxaa la siiyay bilada ugu sareyso ee muwaadin Pakistani ah la siiyo, laakiin SRK xiligaan labada xasarad ka jirto biladaas oo kale ma aqbali karo inuu qaato!
cabdulaahi jaamac says:
aduunoow xaalkaa ba ninkii
halay jilaaga awooda badan ahaa bal daya
deeqo axmed says:
saas baa loo socdaa shaly dhalinyaro today na waayeel alow cimrigena kuwo ka faaidesty hnga dhigo wx adunyo wxna kuma trayaan si kastoo u xoolo badnaato ama qasri ween dhiso ama boqrka mgalda ahow only cmalkaa ku racyo